Njengomthetho, yonke ingcebo yangempela idinga isakhiwo esihle kakhulu, futhi uma silandela isimiso esithandwayo esithi siyinto esiyidlayo, ukudla kwethu kungaba ngumcebo, kodwa ukudla okunephunga nokuphuza umlomo utshani - i-chic kuyo.
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ngumholi ongenakuphikiswa phakathi kwababamele umbuso wezidlo ezidliwayo. Ngendlela, kungukuthi utshani obungabiza isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kungase kube lula kakhulu. Okungenani ngenxa yokuthi ikhona amaqabunga, impande nesaladi.
Umswakama we-celery ubhekwa njengenye yezintuthwane kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo abameleli abanobuhle bezimpande ezivuthiwe. Ungadlulisi amagama, ukuthi uyathandeka kanjani futhi uyayithanda, uma uthatha izimpande zakho bese ubhaka ihhavini elincane noma udosa nge ushizi kanye nosawoti omuncu. Njengoba bethi, kungcono ukuzama kanye! Iqabunga leqabunga lesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi - imifino ebabayo enephunga elikhethekile nelomnandi. Zonke izobho nama-saladi, lapho amaqabunga akhe enziwe khona, ajabulele ukuthandwa okukhulu phakathi kwama-gourmets. Futhi konke ngenxa yenambitheka eyingqayizivele. Ngokuqondene nama-petioles asemanzi e-salad isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, angadliwa ayiluhlaza noma aluhlaza.
Zonke izici "zokuzijabulisa" eziyinhloko zizikhulumela zona: lesi sitshalo ngokwemvelo siqukethe konke okudingekayo ukuze kutholakale amavithamini B1, B2, C, PP, E, kanye ne-carotene, izinto ze-pectic, amaminerali amaminerali namafutha e-ether ayigugu kakhulu.
Kubalulekile ukuthi isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi angatholakala njalo (kunoma yisiphi isizini) ezitolo ezinkulu nasemakethe okuthiwa i-seler. Lona nje leli gama elibhekiswe kakhulu ngemifino, lithengisa imifino ebabayo, futhi abafakizicelo bezitolo bavame ukusebenzisa leli gama.
Amaqabunga ama-celery amasha angafakwa kwimenyu yokudla yothando ngokuwakhonza etafuleni nge-chocolate eshisayo. Umphumela ungaba mnandi kakhulu, ngoba akuyona into yokuthi isilwane esaziwayo samadoda uMarquis Pompadourlubila siphuza.
Igama lakhe lesiLatini elithi rosemary laphuma ngamagama amabili "amazolo" - "amazolo" nelwandle "-" ulwandle ", okuhunyushwa ngokuthi" amazolo olwandle ". Futhi lokhu akumangalisi, ngoba izwe lezilwane lalezi zitshalo eziluhlaza njalo libhekwa njengengxenye engogwini lweLwandle iMedithera. Kwakukhona kulezi zindawo ezishisayo zelanga lapho i-rosemary ibhekwa njengongqongqoshe wokuhlakanipha kwenkumbulo yabantu. Mayelana nenkumbulo, kubalulekile ukuthi isayensi yanamuhla ikwazi ukuqinisekisa zonke izinkolelo zasendulo. Ososayensi bathole ukuthi i-rosemary inenamba enkulu yezinto ezisebenzayo ze-bioflavonoids ezinomsebenzi we-P-vitamin. Ziyakwazi ukunciphisa i-fragility yemithanjeni yegazi, kuyilapho zivuselela ukukhunjulwa kwenkumbulo nokukhathalela, futhi zithinte ngokuphumelelayo ukunikezwa kwegazi ebuchosheni futhi zithuthukise umsebenzi wezinhliziyo.
Lesi sitshalo sisetshenziselwa ukupheka emhlabeni jikelele. Ngosizo lwakhe olwandle olusolwandle lwe-ngulube, inyama ye-mutton kanye nomlenze ukunikeza inyama "ihlathi" elikhethekile, i-pine-lemon flavour.
I-rosemary evelele ayihlanganisiwe nje kuphela inyama ebhaka, kodwa ngamaqanda, amakhowe nazo zonke izinhlobo zemifino.
Emanzini amancane, i-rosemary yengezwa izobho kanye namasiki. Okungajwayelekile nokumnandi ukunambitha, kutholakala izinhlobo zokudla eziqinile, ezilinganiswa nale nhlumela.
Futhi lokhu akusho ukuthi ama-confectioners kanye nabakwa-winemakers nabo basebenzisa i-rosemary ngenhloso ngezinhloso zabo siqu. Ama-Winemakers ayifaka kumawayini anezakhi, kodwa abafake izidakamizwa basebenzisa ama-herbs ashisayo njenge-flavour yemvelo ekwenzeni izithelo zamaqanda namaqanda.
Kodwa naphezu kokuthandwa kwendawo yonke, kusekhona amancane amancane we-rosemary. Akunconywa ukuthi uyisebenzise kanye namaqabunga e-laurel (lezi zinongo ezimbili azihambisani), azikwazi ukukhipha izinhlanzi (iphunga layo linamandla kakhulu ezitsheni zokudoba).
Igama lakhe lesiLatini elithi sage lisho isifiso esihle kakhulu kumaRoma asendulo. Bathi komunye nomunye ngesikhathi somhlangano: "Budzdorov!", Kodwa ngesiLatini kwazwakala "isigqila".
Sage ubuye ummeleli waseMedithera. Kodwa i-ontoltichno isijwayele futhi emaphethelweni noma ezindaweni zethu. Ngenxa yokuthi emafutheni abalulekile kanye ne-lyastviplyvaetsya amafutha abalulekile, lesi sitshalo sinompe oqinile futhi unamakha amafutha, ukunambitheka.
I-sage ivame ukufakwa esikhundleni se-rosemary noma isetshenziswe ndawonye. Hlanganisa namanye amakhambi akukhuthazwa. Ngokuvamile, i-spice isetshenziswa efomini elomile. E-Melika isetshenziselwa ukunambitheka ushizi owenziwe, itiye kanye neziphuzo ezithambile. Amaqabunga amasha esitshalo atholakala kakhulu kuma-marinades.
Ufuna ukwenza inyama ehlanzekile neyiphunga - engeza yona, inomphumela omuhle wokunciphisa. Kuyinto enhle kakhulu ngenyama ye-turkey, i-goose noma i-duck iphinde ibonakale ukunambitheka kwezingulube, ama-sausages, amasoseji kanye neminye yemifino.
Kumele kuqashelwe ukuthi amaqabunga e-sage ane-flavour eqinile, ngakho kufanele afakwe esitsheni ngesamba esincane. Uma kunesidingo, i-spice inganezelwa ekuqaleni kokulungiswa - i-sage inenkani ngokubekezelela ukuphathwa komoya.
Igama lesiLatini lasendulo le-tarragon livela egameni lezinkulunkulukazi abangamaGreki u-Artemis (artemisia). I-Tarragon yenza ngcono ukugaya futhi kusiza umzimba ukuthi ulahle amafutha amaningi. Ngakho-ke, yayibizwa ngokuthi i-spice yokudla. I-Tarragon ibizwa nangokuthi i-tatarhun, enamavithamini anjengeB1, B2, C, PP, magnesium, calcium, iron, potassium, phosphorus, manganese, ithusi, i-cobalt namafutha abalulekile aphunga. Izakhamuzi zincoma ukuthi zifakwe ezifundweni zokuqala nezesibili zokudla kwe-pribesol, kanti abathintekayo bathi lemithi eluhlaza ukuthuthukisa ukulala nokuqabula ukuvuselela. Izindlovu ezifanayo zincoma ukuthi zengeze i-sprig ye-fresh-estragon ngewayini elibomvu elomile nokuphuza izinyanga ezingu-7. Leli vini kufanele lidakwe ukuze lidle ingilazi ngayinye ngayinye.
Izinkulungwane zeminyaka eMpumalanga igama lakhe libizwe ngesibusiso esikhulu - "Reich" (ekuhunyushweni "okumnandi"). Kodwa eGreece YaseMandulo, izinongo zaziphathwa ngokuhlonishwa okukhulu futhi zibizwa ngokuthi izitshalo zezinhlobo zenkosi, i-basil "ende" ehlala isikhathi eside, esho "inkosi." Le idumela lagxila ngendlela ehlekisa, hhayi kuphela ngenxa yemvelaphi yayo yesiGreki. Ukunambitheka kwalesi sitshalo kuhlale kubonakala ezitsheni ngokungalindelekile futhi kancane kancane: ekuqaleni kwazizwa ulaka, bese kuphenduka ukunambitheka okumnandi.
Ukubaluleka kwe-basil kuqukethe amafutha abalulekile, i-carotene, i-phytoncides, amavithamini B2, C kanye nesimiso, esilawula okuqukethwe ezintweni eziphilayo kanye ne-asidi.
Le spice igcwalisa ngokuphelele inyama, inhlanzi kanye nemifino yemifino, igcizelele ngempumelelo ukunambitheka kwabo. Ngendlela, uma ubujwayele ukubhema futhi wanquma ukuzigawula impilo yakho enempilo, faka i-basil entsha ekudleni kwakho - iyogcwalisa ngokuphelele indima yokucindezeleka futhi iyanciphisa ngempumelelo ukuphazamiseka kwemizwa.
Izakhiwo eziwusizo ze-smoothies nokulungiselela
Izithelo zamanzi: izinzuzo zabo emzimbeni
Iklabishi kohlrabi: ukwakheka, izinzuzo kanye nezakhiwo
Iseluleko sochwepheshe ukuthi bavula kanjani isisu esiswini
Zuza kanye nokulimala kwemikhiqizo ye-genetically modified
Amaqebelengwane angama-coconon ngobisi oluncibilikile
Izicucu ze-Cutlets "
I-Potato casserole nebhethoni
Imidlalo yobuciko ngaphambi kocansi
Ukuzikhethela kwesimo sengqondo sabazali emndenini ongaphelele
Imisebenzi ethandwa kakhulu esikhathini esizayo
Yiziphi izimpawu zezinkanyezi ezothola uthando ngo-2018 Izinja
I-Chanterelles ngo-ukhilimu omuncu e-Ukraine